Sharing For All: November 2010
ဒီ link လေးတွေကနေ သွားရင် ရောက်ပါလိမ့်မယ်.........
www.ppstream.com (နိုင်ငံခြားဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်)
http://1kino.com (နိုင်ငံခြားဇာတ်လမ်းလေးတွေပါပဲ- ရုရှားအသံထွက်နဲ့ပါ)
Posted by Coralchitthu at 1:27 PM No comments:
Labels: Site ကောင်းလေးတွေ, ဗီဒီယိုများ
အကြည်တော်- ကျောက်သင်ပုန်းတွေ မိုးထားတဲ့အိမ်
အကြည်တော်- သား ဘီလူး
အကြည်တော်- ကျွန်တော်ထောင်းခဲ့သော ပေါင်များ
အကြည်တော်- ကျွန်တော့်ချစ်သူပြောသော သူ့ချစ်သူအကြောင်း
အကြည်တော်- ဆွေတစ်ရာ မောင်တစ်ကျိပ်
အကြည်တော်- အိမ်မက်အပိုဒ်ခွဲ ၉
အကြည်တော်- ကဝေပျို၏ နိဒါန်း
အကြည်တော်- အသဲကွဲ 24 နာရီ
အကြည်တော်- တခါက ငယ်ငယ်လေးတွေ
အကြည်တော်- ယောက္ခမနဲ့ တစ်ထောင့်တစ်ည
အကြည်တော်- ပြုတ်ထွက်သွားသော ကျောရိုးဆစ်လေးများ
Posted by Coralchitthu at 2:35 AM No comments:
မင်းလူ- ခေါင်းလောက်းထိုးသံနှင့် အခြားပုံပြင်များ
Posted by Coralchitthu at 1:30 AM No comments:
နီကိုရဲ- ကျွန်တော်နှင့် လက်တွဲဖော်များ
နီကိုရဲ- နတ်ဆိုးတကောင်နှင့် ရင်လွဲသူ
နီကိုရဲ- လူနှင့်သူတို့၏ ဟာသများ
နီကိုရဲ- နှလုံးသားထဲ ကြွက်ဝင်နေသည်
နီကိုရဲ- သံစုံကြူးတဲ့ ည
Posted by Coralchitthu at 5:59 PM No comments:
English လေ့လာချင်သူများအတွက် link ကောင်းလေးတွေပါ.....
( Study English in Hong Kong International Students)
Posted by Coralchitthu at 1:20 PM No comments:
တာရာမင်းဝေ- ကိုယ့်လက်နဲ့ ဖမ်းမိတဲ့ နဂါးငွေ့တန်း
တာယာမင်းဝေ- ရွှေဖိနပ်မှာ အစိမ်းရောင်ကြက်ခြေခတ်နဲ့ကောင်မလေး
တာယာမင်းဝေ- သင်နှင့်နံနက်ခင်းကိုသာ ၀င်ခွင့်ပြုသည်
Posted by Coralchitthu at 11:52 AM No comments:
Web page အတွက်.....
Web Tutorials, Scripting, Database, Miscellaneous အကြောင်းလေးတွေ ကောင်းကောင်းသိနိုင်တဲ့
HTML Tutorials နဲ့ အခြား HTML အကြောင်း စုံလင်စွာ ပါတဲ့ Site လေးပါ..
Web developer ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ.....
Posted by Coralchitthu at 10:06 AM No comments:
Labels: Site ကောင်းလေးတွေ
Software, Driver လိုမျိုးတွေကို မြောက်များစွာ download လုပ်နိုင်ပါတယ်...
Posted by Coralchitthu at 9:54 AM No comments:
Labels: Site ကောင်းလေးတွေ, Software များ
မြန်မာသီချင်းအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ MP3သီချင်းပေါင်းစုံကို တနေရာထဲမှာ ယူလို့ရတဲ့ site လေးပါ .........
ဒီနေရာမှာ Download ယူလိုက်ပါနော်...
Posted by Coralchitthu at 5:23 PM No comments:
တစ်ညနေခင်းမှာပါ။ မအေလုပ်သူက မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ညစာအတွက် ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်နေတုန်း သားလေးက မအေအနားရောက်သွာပြီး သူရေးထားတဲ့ စာရွက်လေးတစ်ရွက်ကို အမေ့ဆီ ကမ်းလိုက်တယ်။ အမေလုပ်တဲ့သူက အနားမှာ ရှိတဲ့ လက်နှီးနဲ့ လက်ကို ခြောက်အောင် သုတ်လိုက်ပြီးတော့မှ သားပေးတဲ့ စာရွက်လေးကို ယူဖတ်လိုက်တယ်။စာရွက်လေးပေါ်မှာတော့ သည်လိုရေးထားတယ်။
အမေဈေးသွားနေစဉ် ညီလေးကို ထိန်းခ------------------------------------------------------၂၅
အတန်းထဲမှာ ပထမရအောင် လုပ်ခ--------------------------------------------------------- ၅၀၀
အမေက စာရွက်ကို ဖတ်အပြီးမှာ သူ့နံဘေးမှာ မျှော်လင့်တကြီးနဲ့ မအေကို မော်ကြည့်နေတဲ့ သားငယ်ကို ကြည့်ရင်းက စဉ်းစားနေလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မင်တံတစ်ချောင်းကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။ သားငယ်ရေးထားတဲ့ စာရွက်ရဲ့ ကျောဘက်ကို လှန်လိုက်ပြီး လွတ်နေတဲ့ အဲသည့် ကျောဘက်မှာပဲ ရေးစရာရှိတာတွေ တန်းစီပြီး ချရေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုးလလုံးလုံး သားကို မေမေ့ဝမ်းထဲမှာလွယ်ထားခ--------------------------------------------------အခမဲ့
သားနေမကောင်းတဲ့အခါတွေမှာ တစ်ညလုံးမအိပ်ပဲ သားကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်း
ဘေးရန်ကင်းရှင်းပါစေ ကြောင်း အခါခါ ဆုတောင်းခဲ့ရတာများအတွက်-----------------------------အခမဲ့
သားအတွက်ကျခဲ့တဲ့ မျက်ရည်တွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် ရလာမယ့် မေမေ့မေတ္တာတန်ဖိုး-------အခမဲ့
ကစားစရာ၊ စားရာ၊ ၀တ်စရာတွေနဲ့ သားရဲ့ဖိနပ်ကို သုတ်ပေးခများအပါ
စုစုပေါင်းမေမေ့ မေတ္တာစစ်အတွက် ကျသင့်ပေါင်း--------------------------------------------------အခမဲ့
အားလုံးကိုချရေးပြီးတော့မှ အမေက စာရွက်လေးကို သားဆီပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။သားလေးက အမေရေးထားတာလေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက် မအေကို မော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ သူ့မျက်ဝန်းထဲမှာ
မျက်ရည်စလေးတွေနဲ့။ ပြီးတော့ သားကပြောပါတယ်။
မေမေ့ကို သားသိပ်ချစ်တာပဲ တဲ့။
ပြီးတော့ အမေစောစောက ကောက်ကိုင်လိုက်တဲ့ မင်တံကို ယူပြီး သူတင်ပြတောင်းဆိုထားတဲ့ စာရင်းအောက်မှာ စာလုံးကြီးကြီး နဲ့ ခပ်သွက်သွက်ချရေးလိုက်ပါတယ်။
အတ္တကျော်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ Brian Adams ရေးတဲ့ No charge ဆိုတဲ့ စာတိုလေးကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်
Posted by Coralchitthu at 10:36 AM No comments:
မိန်းမကြီးတစ်ယောက်မှာ ကလေးရှစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲသည် ကလေးရှစ်ယောက်မှာ သုံးယောက်က နားမကြားဘူး၊ ဆွံ့အနေတယ်။ နှစ်ယောက်က မျက်စိမမြင်ဘူး။ တစ်ယောက်က သွက်ချာပါဒလိုက်နေတယ်။ အဲဒီ မိန်းမကြီးကိုယ်တိုင်မှာကလည်း ကာလသားရောဂါဖြစ်နေတယ်။ အခု အဲသည့် မိန်းမကြီးမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာပြီ။ စာဖတ်သူလူကြီးများမှာသာ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင် အဲသည်မိန်းမကြီးရဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်ချလိုက်သင့်တယ် လို့ ဆုံးဖြတ်ပေးမလား။
ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကိုရွေးရတော့မယ်။စာဖတ်သူ လူကြီးမင်းရဲ့ ရွေးချယ်မှုကသာ နောက်ဆုံး အဆုံးအဖြတ်ကို ပေးမှာ။အရွေးခံမယ့်သူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလည်း ဖတ်ရှုတော်မူကြပါဦး။
ကလိန်ကကျစ် နိုင်ရံရေးသမားတွေနဲ့ ရောရောနှောနှော နေတတ်တယ်။ဗေဒင်လည်း ယုံတယ်။တိတ်တိတ်ပုန်း မယားကလည်း နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ဆေးလိပ်ကိုလည်း မီးကူးပြီးတောင်သောက်တဲ့သူ။ မာတီနီအရက်ကလည်း တစ်နေ့ကို ရှစ်ခွက်ကနေ ဆယ်ခွက်အတွင်း မှန်မှန်ချနေတဲ့သူ။
အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရဖူးတာ နှစ်ခါ။ မွန်းတည့်မှ အိပ်ရာထတတ်တယ်။ ကောလိပ်တက်တုန်းက ဘိန်းလည်းစားဖူးတယ်။ အခုတော့ ညနေတိုင်း ၀ီစကီ ပုလင်းဝက်လောက် ချတဲ့သူ။
ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့တံဆိပ်ရထားတဲ့ စစ်ပြန်သူရဲကောင်းပါ။သတ်သတ်လွတ် စားတယ်။ဆေးလိပ်မသောက်ဘူး။ ဘီယာတော့ ပွဲလန်းသဘင်တွေမှာ ရံဖန်ရံခါ သောက်တတ်သပေါ့။အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုကို တစ်ခါမှ မကျုးလွန်တဲ့သူ။
ဟုတ်ကဲ့ ……အဲ့သည်မိန်းမကြီးအနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချသင့်တယ်လို့များ လူကြီးမင်းက ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် လူကြီးမင်းဟာ ဂီတပညာရှင် ဘီသိုဗင်ကို သတ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားမှာပါပဲ ခင်ဗျား။ ဘီသိုဗင်ဟာ အဲသည့် ကိုယ်ဝန်ကနေ လူဖြစ်လာသူပါပဲ။
ကိုယ်စားလှယ်တော် (က) ဟာ အမေရိကန် သမ္မတကြီး ဖရန်ကလင်ဒီ ရုစဗဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်စားလှယ်တော် (ခ) ဟာ ရုစဗဲ့နဲ့ ခေတ်ပြိုင် ဗြိတိသျှနန်းရင်းဝန် ၀င်စတန်ချာချီ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်စားလှယ်တော် (ဂ) ကတော့ အာဏာရှင် ဟစ်တလာ ပါခင်ဗျာ။
စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းဘူးလား ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ တစ်ခုခုကို ဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင် အပေါ်ယံကြောနဲ့ အားလုံးကို ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ချည်းပါပဲ။အပေါ်ယံနဲ့ အတွင်းပိုင်း ဘယ်လောက် ကွဲလွဲတယ်ဆိုတာ သည်မေးခွန်းတွေက သက်သေထူနေတာကတော့ အမှန်ပါပဲ။
အတ္တကျော် ရေးတဲ့ ဘ၀တူရိယာ (မောဟပြေ ပုံတိုပတ်စများ)မှ ကောက်နုတ်ထားပါသည်။
Posted by Coralchitthu at 10:19 AM 1 comment:
ဖြစ်ချင်တော့အဲဒီနေ့မှာပဲ ဘီယာတွေပရိုမိုးရှင်းလုပ်တဲ့အနေနဲ့ အခမဲ့သောက်သုံးခွင့်ပေးတာနှင့်
ဒုတိယအမျိုးသမီးမှာတော့ သူယောင်္ကျားဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ အသစ်ဂျပ်ချွတ်လေးဆိုတော့
လုပ်ခဲ့ပါတယ်..။ ဖြစ်ချင်တော့ကိစ္စတွေပြီးလို့ဘောင်းဘီပြန်ဝတ်တဲ့အချိန်မှာ ဖဲကြိုးအနီလေးဟာ
“ခင်ဗျားကို ကျုပ်တို့တပ်စုတစ်ခုလုံးက မှတ်မှတ်ရရရှိနေမှာပါ " တဲ့ကွာ။ ။
Posted by Coralchitthu at 11:45 AM No comments:
အောက်က link လေးတွေကနေ ၀င်နိုင်ပါတယ်...
TOEFL COURSE Practice -Test 1
TOEFL COURSE Practice -Test 2
TOEFL COURSE practice - Listening Test
အားလုံး အင်္ဂလိပ်စာ ကောင်းမွန်ကြပါစေ......။
Posted by Coralchitthu at 3:47 PM No comments:
CoralDraw software ပါ.........
ကျွန်တော့် mailထဲကို ဧဒင်ဥယျာဉ်က အဖွဲ့ဝင်10000 ပြည့်အမှတ်တရကနေ ပို့ပေးထားတာပါ...
US$ 380.00တန်ဖိုးရှိတဲ့ Original Serial Number ပါတဲ့ Coral Draw Graphic Suit12 တခုလုံးပါ။
Serial no. DR12WRG-7070178-WDD
Posted by Coralchitthu at 3:28 PM No comments:
ဟုတ်ကဲ့ အခုဆိုရင် Firefox က Google ကို စ ပေးတယ် ခင်ဗျ... Google က
Facebook ကို ထပ်ပေးပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ တက်တယ်ခင်ဗျ… ကျတယ်ခင်ဗျ… ပြန်တက်တယ်။
ပြန်ပြုတ်ကျတယ်။ ရတနာပုံက မခံပါဘူးခင်ဗျာ… ပြန်ဖြတ်ချတယ်ခင်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ADSL က
နာမည် အပျက်မခံဘူးခင်ဗျ။ အခုအချိန်မှာဆိုရင် ပုဂံက စိတ်ညစ်လို့ မှိုင်နေတယ်ခင်ဗျ။ ဟော... ပြောရင်နဲ့တက်လာပြန်ပါပြီခင်ဗျ။ ရတနာပုံက ရာဇဝင်အရိုင်းမခံပါဘူးခင်ဗျာ... ပြန်ဖြတ်ချပါတယ်။ အခုဆိုရင် Connection ကြီးဟာ ပြောနေရင်းနဲ့ ပြတ်ကျသွားပါပြီခင်ဗျား...
ရတနာပုံဘက် ပါသွားပြန်ပြီခင်ဗျ… Facebook တက်တယ်။ User တွေက ဝိုင်းအားပေးတယ်ခင်ဗျ… ရတနာပုံက ပြန်ဖြတ်ချတယ်။ Google တက်လာပြန်ပြီ... ဒိုင်လူကြီး ပုဂံက Network Busy ပြပါတယ်ခင်ဗျ။ (အသုံးကြမ်းလို့ ပါတဲ့)... Gmail လေးက တက်ဖို့ ချောင်းနေတယ်ခင်ဗျ... Loading လေး ဆွဲပြေးသွားပြီ... ပြည့်ခါနီးပါပြီခင်ဗျ... ဟုတ်ကဲ့ အပြည့်ရောက်ခါနီးမှာပဲ Connection က ပြန်ဖြတ်ချလို့တစ် နေပါတယ်ခင်ဗျ။ အားပေးနေတဲ့ User တွေဟာ အခုဆိုရင် သုံးရတာ ဆန့် တငံ့ငံ့ ဖြစ်နေပါတယ်။ ရတနာပုံရဲ့ အစွမ်းတွေပေါ့ခင်ဗျ... ပွဲကို ကြည့်ရတာ ရင်တဖိုဖိုနဲ့ ဘယ်တော့ ပြန်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုတော့ ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျ... ဟုတ်ကဲ့ပြောရင်းနဲ့Facebook လေး Singin ဝင်သွားပြီခင်ဗျ... Home Page လေး တက်နေရင်းတန်းလန်း တစ်ဝက်ပဲပေါ်သေးတယ် ငြိမ်သွားပါပြီခင်ဗျ... အောက်ကို ကြည့်လိုက်တော့ Done ပါတဲ့... ဒါနဲ့User ကအငြိမ်မနေပဲ Refresh ပြန်လုပ်တယ်ခင်ဗျ... Network Timeout ပါတဲ့… ဒိုင်လူကြီး ပုဂံက အလစ်ကို မပေးပါဘူးခင်ဗျ... ဟုတ်ကဲ့ User ကို တိုးတိုး တိုးတိုးနဲ့> သွားပြောနေပါတယ်ခင်ဗျ... ဘာပြောတာပါလိမ့်...? ဟုတ်ကဲ့ User က ဒီဘက်ကိုပြန်ပြောတယ်ခင်ဗျ... ဒိုင်လူကြီးက ပြောပါတယ်တဲ့ "အဲလောက်နဲ့ တက်တက်မလာနဲ့ " လို့ ပြောပါတယ်တဲ့။
ဟုတ်ကဲ့ အခုဆိုရင် User တွေနဲ့ ရတနာပုံနဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်တွေ ဖြစ်တော့မယ်ခင်ဗျ... User တွေကလဲ တင်းတယ်ခင်ဗျ... ရတနာပုံကို အသေရရ အရှင်ရရ ပါတဲ့... ရတနာပုံက Complain တက်တယ်ခင်ဗျ... FTTH တွေ တပ်နေလို့ပါတဲ့။ ဟုတ်ကဲ့ User က မယုံပါဘူးခင်ဗျာ.. ဟုတ်ကဲ့ အခုဆိုရင် ပွဲစနေတာ ၁ ပတ် လောက်ရှိပါပြီခင်ဗျ... ပွဲဟာဆိုရင် ပြီးဖို့နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့ အထိ စောင့်ရမယ်သဘောရှိတယ်ခင်ဗျ... ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ကြေငြာနေစဉ်အတွင်းမှာပဲ ကွင်းဘေးဒိုင် EPC က မီးဖြတ်ချလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားးးးးးးးးး :D
Posted by Coralchitthu at 3:08 PM No comments:
အောက်က link လေးကနေ Download ချလိုက်ပါ...
Download for AVG
8 နှစ်ခံ key နှစ်ခုပါတယ် အဆင်ပြေတာကို ထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်...
Posted by Coralchitthu at 3:02 PM No comments:
Labels: antivirus, Software များ
၁၈။ ဖိနပ်စုတ်နှင့်လက်ဖက်သုတ်
အားလုံးလိုက်နာရမယ်နော် ………. –
ဒီစာလေးဖတ်ပြီး စိတ်အမောတွေ ပြေနိုင်ကျပါစေ။
Posted by Coralchitthu at 3:13 PM No comments:
အမေနဲ့ သမီးမေတ္တာဖွဲ့ ၀တ္တုတိုလေးပါ ..........
အမေ့ရဲ့အော်သံကြောင့် မျက်စိများ ပွင့်ခဲ့ရပါပြီ။ အမြဲတမ်းလုပ်နေ ကျအတိုင်း
အိပ်ယာကနေ နိုးနိုးချင်း မှန်တွေ ကွဲအက်နေတဲ့ နံရံကပ် နာရီကို လှမ်း ကြည့် လိုက် ပါတယ်။ နာရီကို ကြည့်ပြီးတာနဲ့ ကျွန်မဟာမျက်မှောင်ကြုတ်ရင်း အမေ့ကို ဘာလို့ ခုမှနှိုးတာလဲ.. နောက်ကျကုန်ပြီ...
Posted by Coralchitthu at 12:00 PM No comments:
ချစ်သူ့အတွက် ပို့လို့ကောင်းနဲ့ အကြောင်းလေးပေါ့.....
ဘုရားသခင်သည် လူသားမိန်းမအား ဖန်ဆင်းနေစဉ်အတွင်း ၆ ရက်မြောက်နေ့ တွင်
နတ်သမီးတစ်ပါးရောက်လာပြီး ဘုရားသခင်အား ........
Posted by Coralchitthu at 11:28 AM No comments:
Posted by Coralchitthu at 10:18 PM No comments:
ချစ်လို့စတာကိုနော့် ငိုနဲ့ ကလေး...
Posted by Coralchitthu at 10:11 PM No comments:
Labels: ဓာတ်ပုံလေးတွေ, ဟာသများ
စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များနေသလား သိရအောင် အောက်မှ မေးခွန်းလေးတွေ ဖြေကြည့်ရအောင်.....
အရမ်း အရမ်းရှည်တဲ့ အုန်းပင်တစ်ပင် နဲ့ မျောက်အမျိုးအစား လေးကောင်ရှိသတဲ့ ...
Posted by Coralchitthu at 9:53 AM No comments:
How to try wining?
Posted by Coralchitthu at 9:50 AM No comments:
Labels: ဗီဒီယိုများ, ဟာသများ
Idea ကောင်းတယ်ဗျာ။ အချိန်ရရင်တော့ ကြည့်စေချင်တယ်...
Posted by Coralchitthu at 2:18 AM No comments:
Labels: ဗီဒီယိုများ, ရသ
ဆရာဖြစ်သူက တပည့်များအား အလုပ်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ရန် ဆုံးမနေသည် _
"အေး ငါ့တပည့်တို့ .... မင်းတို့ မသေမချင်းမှတ်ထား ...... ဘယ်အလုပ်မဆို
အောက်ခြေကစရတယ်ကွ... ပြီးမှ တဖြည်းဖြည်းချင်း အပေါ်ကို တက်ရတယ်..." တပည့်တစ်ယောက်ကမေးသည်..
အင်မတန်မှ ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ နိုင်လွန်းတာပါ...
ဥပမာ.. ပြွန်တန်ဆာတဲ့...နောက် ဂွေးချိုတဲ့..အဲ...ပြတိုက် ရောက်ဖူးတဲ့
ရေစကြိုနယ်ဘက်ကရွာဆို ဖုတ်ကုန်းတဲ့ဗျာ...အဲလိုပါ..ဘာကြောင့် ဘယ်လို မှည့်ခေါ်ထားလဲဆိုတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတော့ အတိအကျ
လိုက် ခေါ်လေ့ရှိတော့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးလည်း ကင်ပွန်းတပ်
တစ်ဆူတည်မယ်ပေါ့..။ ဒီလိုနဲ့ ကိုးတောင်ပြည့်စေတီလေး တစ်ဆူတည်ပြီးတဲ့နောက်တော့
Posted by Coralchitthu at 2:06 AM No comments:
ကျွန်တော် ဖတ်ဖူးတဲ့ စာဖတ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တာလေးတွေပါ။ ကောင်းတယ်ထင်တဲ့ စာသား လေး တွေပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့ကိုပြောစရာရှိရင်လည်း ပြန်အကြံပေးကြပါဗျာနော်.......
ကိုယ်ဖတ်မည့်စာအမျိုးအစားကို သိပြီဆိုတာနဲ့ ထိုစာကို မျှော်ကိုးမှုနှင့်ဖတ်ပါ။
မျှော်ကိုးမှုဆိုသည်ကို သိလိုလျှင် အောက်ပါမေးခွန်းများဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ပြန်မေးကြည့်ပါ...
အကြောင်းအရာ အချက်အလက်တို့ကို မှတ်သားထားဖို့ လိုမည်လား။
စင်စစ်အားဖြင့် စာဖတ်ခြင်းသည် လူတို့ ၌ထမင်းစားခြင်း ၊ရေသောက်ခြင်း အသက်ရှူခြင်းတို့ ကဲ့သို့ ပင် အရေးကြီးသော ဆောင်ရွက်ဖွယ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပေသည်။ ထမင်းစားခြင်း ၊ရေသောက်ခြင်း စသည်တို့ မှာ ကိုယ်ကာယ၏ အာဟာရကို ဖြည့်တင်းရုံမျှသာဖြစ်၍ စိတ်၏အလိုဆန္ဒ အာဟာရကို မဖြည့်တင်းနိုင်ပေ။ စိတ်မှာလည်း ကိုယ်ကာယကဲ့သို့ ပင် ပညာဗဟုသုတဟူသော အာဟာရ လိုပေသည်။ ထက်သန်သော စိတ်မျိုးတို့ မှာ ထိုသို့ သော အာဟာရမျိုးကို လွန်စွာတောင့်တလျှက် ထိုထိုဤဤ ကြံဆဆင်ခြင်ခြင်းကို အမြဲမပြတ်ပြု၍ နေတတ်ရာ မိမိအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရာများဖြင့်သာလျှင် တင်းတိမ်ရောင့်ရဲခြင်းမရှိ...။ လမ်းပြသဖွယ်ဖြစ်သောပညာဗဟုသုတတို့ ကို များစွာ လိုပေသည်။ ထိုအခါ စာဖတ်ခြင်းအလေ့သည် အလွန့် အလွန် အသုံးဝင်လာလေသည်။ ကမ္ဘာ့လူမျိုးတို့ ၌ ယဉ်ကျေးသည် ၊ရိုင်းစိုင်းသည်ဟူသည်မှာ ပညာဗဟုသုတ ရှိသည် မရှိသည်ကို ကြည့်၍ ပြောခြင်းဖြစ်ပေသည်...။ ပညာဗဟုသုတကို နုတ်ပယ်ထားလိုက်လျှင် လူယဉ် လူရိုင်းဟူ၍ ကွဲပြားခြားနားခြင်း မရှိနိုင်တော့ပေ...။
ပညာဗဟုသုတတိုးပွားကြီးကျယ်သလောက် လူတို့၏ အခြေအနေလည်းတိုးတက် ကြီးပွားလျှက်ရှိကြပေသည်...။ ပညာဗဟုသုတ ကင်းမဲ့သောစိတ်မျိုးမှာ အစာအာဟာရကင်းမဲ့သော ကိုယ်ခန္ဓာကဲ့သို့ကြုံလှီဖျော့တော့ အားအင်ချိနဲ့ အသုံးမ၀င် ဖြစ်ရချေသည်...။ပညာဗဟုသုတ ကြီးပွားကျယ်ပြန့် ရန် အကောင်းဆုံး ၊အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်းမှာ စာပေဖတ်ရှု မှတ်သားရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
မိမိကိုယ်တိုင် ကမ္ဘာတပြင်လုံးကို အနှံ့ အစပ်သွားရောက်၍ ဗဟုသုတ အကြားအမြင်ကို ရှာဖွေလျှင် အဆန်းတကြယ်မှတ်သားဖွယ်ရာ အသစ်တို့ ကို တွေ့ မြင်မှတ်သားရရုံမျှသာ ရှိချေမည်..။စာဖတ်ရှုခြင်း အလေ့အထ၌မူကား အသစ်အသစ်သော အကြောင်းအရာအတ္ထုပ္ပတ္တိတို့ ကို သိရှိရုံမျှသာမကဘဲ မိမိနှင့်ဥာဏ်ရည်တူ မိမိထက်ဥာဏ်ပညာထက်မြက်စူးရှသူတို့ ၏ စိတ်ကူးအကြံဥာဏ် ထင်မြင်ချက် ဆုံးဖြတ်ချက်တို့ ကိုပါ ရရှိနိုင်သည် ဖြစ်၍ မိမိစိတ်ရင်း ဥာဏ်ရင်းကို နှိုးဆော်ကူပင့်ကြီးမား ထက်သန်လာစေနိုင်သောကြောင့် ပညာဥာဏ်ကြီးမားသောအဖြစ်ကို ရနိုင်ကြပေသည်....။ ထို့ ကြောင့် စာဖတ်ခြင်း အလေ့အထကို အမှုမဲ့ စွန့် လွှတ်မထားဘဲ တတ်အားသရွေ့ ပွားများ ဖြစ်ထွန်းစေအပ်သည် ...။
စာအမျိုးမျိုးတို့အနက် သမိုင်းကျမ်းတို့သည် ဖတ်သူအား အမြင်ကျယ်စေသည်။ ကဗျာစာဆိုတို့ကမူ ကွန့်မြူးသောဥာဏ်ဖြင့် ထူးကဲရှုမြင်တတ်စေသည်။ သင်္ချာကား လျင်မြန်သောဥာဏ်ကို ပေးသည်။ သဘာဝ သိပ္ပံသည် ဗဟုသုတကို နက်ရှိုင်းကြွယ်ဝစေပြီး ဒဿနက တည်ကြည် လေးနက်စေသည်။ ယုတ္တိဗေဒနှင့် ၀စနာလင်္ကာရ(အာဝဇ္ဇန်း) ပညာများကမူ သူတပါးနှင့် ရင်ဆိုင်ယှဉ်ပြိုင် ပြောဆိုနိုင်ပေသည်။
Posted by Coralchitthu at 1:00 AM No comments:
ကျွန်တော့် mail ထဲရောက်နေလို့ TVလိုင်းကောင်းလေးတွေရှာကြည့်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်ပါ မြန်မာ့TVလိုင်းလဲရတယ်ဗျ။ ဒီ link ကနေ ဆက်လှုပ်ရှားနိုင်ပါတယ်ဗျာ...
ကြိုက်ရင်တော့ တခြားသူငယ်ချင်းတွေလည်း ဝေမျှပေးလိုက်ဗျို့...
Posted by Coralchitthu at 12:49 AM No comments:
ချစ်သူ့အတွက် ပို့လို့ကောင်းနဲ့ အကြောင်းလေးပေါ့.......
စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များနေသလား သိရအောင် အောက်မှ မေးခွန်...
Idea ကောင်းတယ်ဗျာ။ အချိန်ရရင်တော့ ကြည့်စေချင်တယ်.....